3 min novakiana
Ny marary dia zavatra mahazatra. Ny ankamaroan'ny olona dia mandalo azy io indraindray, fa indraindray ny aretina dia mety hanjary be loatra. Ireo izay mahatsikaritra fa marary ny zanany matetika dia mety te-hijery raha ny tranony no mahatonga izany. Mazava ho azy fa manontania dokotera aloha, fa ireo izay efa nanao an'io ary tsy manana valiny, dia mety te handinika izao manaraka izao.
Olana amin'ny famelezana
Zavatra iray izay mety hahatonga ny zanakao harary dia mety infestation. Ny karazan-bibikely rehetra dia mety hiteraka fihenan'ny alikaola amin'ny olona sasany; ohatra, ny katroka dia mamela ny fako mety hahasosotra ny zaza. Te hanao izay tsara indrindra vitanao ianao mba hiresahana amin'ny matihanina raha miahiahy fatratra.
Azonao atao ny manome antoka fa manadio ny tranonao matetika ianao mba hitazomana ny vovoka farafahakeliny. Ny vovoka be loatra dia azo antoka fa miteraka asthma sy allergy raha ratsy ny toe-javatra. Tokony homarihina ihany koa fa ny vovoka be loatra dia hisarika ny vovoka, ary ireo zavamiaina bitika ireo dia mety hahatonga ny zanakao ho marary. Ny fitazonana ny fahadiovan'ny tranonao dia tsy mandany vola firy, ary mety ho faly ianao mahita trano madio foana.
Eo an-tampon'ny olana
Ny mould no mety mahatonga ny zanakao marary. Ity fitomboan'ny holatra ity dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra, tenda ary havokavoka. Ny ankizy voan'ny sohika dia mety hanafika betsaka noho ny mahazatra satria misy bobongolo ao an-tranonao. Ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra mitranga dia satria misy fivoahan'ny tampon-tranonao. Mila miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny tafontrano ianao mba hiantohana fa tsy hiharatsy ny olana.
Mety hahagaga raha mahafantatra fa misy vokatra marobe fanadiovana ratsy any izay mety hahatonga ny zanakao harary. Ny tianao hatao dia alao antoka fa ny vahaolana fanadiovanao rehetra dia voajanahary araka izay azo atao mba hampihenana ny habetsaky ny zavatra simika ao an-tranonao. Ity tendrony ity dia tsy natokana ho an'ny vahaolana fanadiovana fotsiny. Ohatra, ny ankamaroan'ny mpanadio rivotra dia misy dichlorobenzene, izay nisy ifandraisany tamin'ny olan'ny havokavoka, ary tsy tianao hampiharihary izany ny zanakao.
Ireo no sasany amin'ireo antony mety mahatonga ny aretin'ny zanakao ao an-tranonao. Antenaina fa afaka manova ny fomba fiainanao ianao mba hahafahanao mampihena ny fotoana marary ny zanakao.